Mugovera 15 Nyamavhuvhu 2020
VaMugabe Vokurudzira VaTrump Kusaita Zvemangoromera
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakakatyamadza vanhu vakawanda pasi rose nemusi weChina nekushora kwavakaita mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vachiti vanofanira kukurudzira runyararo pasi rose kwete kuda kuita zvemangoromera.
Chirongwa cheKanzuru yeHarare Chekugadzira Magetsi Pachishandiswa Marara neMvura yeMasuweji Chofarirwa neVagari vemuMbare
Chirongwa chekanzuru yeHarare chekugadzira magetsi pachishandiswa marara nemvura yemasuweji mumusha weMbare chiri kutambirwa zvakanaka nevagari vemunzvimbo iyi. Ngatinzweyi nyaya ina Patricia Mudadigwa.
Kubvumbi 21, 2017
Vakawanda Votaura Pamusoro peZvibvumirano zvaVa Tsvangirai neMamwe Mapato
Zvichitevera kunyoreranwa kwakaitwa zvibvumirano zvekushanda pamwe munyaya dzesarudzo kwakaitwa naVaTsvangirai, Amai Joice Mujuru, pamwe naVaWelshman Ncube, vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vamirira kuona kushanda kuchaita zvibvumirano izvi.
Kubvumbi 11, 2017
Hurukuro naAmai Sasi Ncube
Kurume 15, 2017
Hurukuro na Amai Monica Mutsvangwa
Kurume 06, 2017
Mutevedzeri weMutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe, Vanoshanyira Vanhu Vakawirwa neMafashamu kuTsholotsho
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe, vanoti hurumende inofanirwa kuwona kuti vanhu nemasangano ari kuda kupa rubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu munyika vanoita izvi vasingasangane nezvimhingamupinyi.
Kuzara kweMadhamu Kwofadza Meya weBulawayo, VaMartin Moyo
Vana Chiremba Navana Mukoti Vemuzvipatara Zvehurumende Voramwa Mabasa
Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichioma muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti pamwe navana chiremba. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti vari kuda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe nehurumende. Patricia Mudadingwa weStudio7 anotipa nyaya inotevera.
Hurukuro naMuzvare Lynda Masarira
Kukadzi 10, 2017
Mapurisa Oshungurudza Nekusunga Vanoita Zvekutengesa Mumigwagwa muHarare
Mumwe mudzimai ane mwana mudiki anotengesa mumigwagwa muHarare asungwa pamwe nekushungurudzwa nemapurisa. Sachigaro we National Vendors Union Of Zimbabwe, Va Sten Zvorwadza vanoti havasi kuziva kuti mudzimai uyu ari kupi. VaZvorwadza vataura naMarvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio 7 nezve nyaya iyi.
Kukadzi 08, 2017
Mutungamiri weTransform Zimbabwe Anoti Anowona Bato Rake Richidyidzana NeHurumende yaVaTrump
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe VaJacob Ngarivhume avo vari kushanya muAmerica pari zvino vanoti vanowona bato ravo richidyidzana nehurumende yaVa Donald Trump ichangobva kugadzwa. VaNgarivhume vanoti mapato emunyika anofanirwa kudzidza kubva kuAmerica panyaya yehutongo hwejechetere.
Kukadzi 04, 2017
Vatsigiri vePeji reVOA Shona PaFacebook Votaura Pfungwa Dzavo Pamusoro Pemutero Mutsva WeVAT
Vatsigiri vepeji reVOA Shona paFacebook vari kushora hurumende nemutero mutsva we15% VAT uyo wakadzikwa pachikafu muchinguva chapfuura. Vazhinji vanoti hurumende inofanirwa kunzwira vanhu tsitsi sezvo mari irikunetsa kuwana, uye kusina mabasa, izvo zvoita kuti vanhu vazhinji vanonge svosve nemuromo.